मुख छोपेरै समातिन् मीराले « Jana Aastha News Online
मुख छोपेरै समातिन् मीराले
प्रकाशित मिति : २४ पुष २०७४, सोमबार ०९:३९
मुखमा मास्क लगाएकी छन् । गुनासो छ, ‘स्तन एकदमै सानो भयो । श्रीमान्ले पनि वास्ता गरेनन् ।’ पसलेले भन्यो, ‘के चिन्ता गर्नुहुन्छ ? यो लिएर जानुस्, एक महिनामा काम भएन भने पैसा फिर्ता †’ उनले गुनासो गरिन्, ‘पहिला पनि यहीँबाट यही औषधि लगेको । तर, काम भएन ।’ पसले कड्किए, ‘नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ †’ त्यसपछि ‘स्तन सानो भएकी’ महिलाले इशारा गरिन् । झुरुप्प सादा पोशाकवाला मानिसहरु भेला भए । ‘उहाँलाई हाल्नुस्’ भन्दै आफू पनि गाडीको अघिल्लो सीटमा बसिन् ।
यी ‘स्तन सानो भएकी’ ग्राहक थिइन्, नेपाल पुलिसमा कडा मिजासकी भनेर चिनिने एसपी मीरा चौधरी । खासमा उनलाई स्तन बढाउनु परेको त थिएन, तर उनको जस्तो सानो स्तन भएका थुप्रै महिला स्तन ठूलो पार्ने चक्करमा दिनदिनै र दिनदहाडै राजधानीभित्रै लुटिँदै थिए ।
‘लिंग उत्तेजित नभएर एकदमै हैरान भयो । यौनसम्पर्क गर्दा बल्ल–बल्ल लिंग सोझिन्छ, तर तुरुन्तै फेरि लत्रक्क परेर खत्तम ! मलाई यसको दबाई दिनुप¥यो साहुजी †’ यस्तो सुनेपछि ‘एक गिलास दूधमा हालेर दिनमा दुईपटक खाने’ भन्दै बसुन्धराका पसलेले एउटा औषधि दिए । ‘लिंग उत्तेजित भएन’ भन्ने ग्राहकले औषधिमात्र हातमा लिएनन्, पसलेलाई ‘यता आउनुस् त’ भनेर बोलाए । ‘किन रहेछ’ भन्दै ‘ग्राहक’ को छेउमा पुगेका मात्र के थिए, च्याप्प समातेर गाडीमा हाले । अनि परिचय दिए, ‘म डिएसपी कवित कटुवाल हुँ ।’
यसरी एक हप्ताअगाडि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रहरीहरु १० वटा टोली बनाएर आफैँ–आफैँ यौनको बिरामी बन्दै राजधानीका विभिन्न भागमा छरिए । कसैको यौन सम्पर्क शुरु नहुँदै वीर्य स्खलन हुने, कसैको उत्तेजना साम्य नभएर समस्या परेको, कोहीकी श्रीमती उत्तेजित भइनन् भन्ने गुनासो । यस्तो गुनासो लिएर १० वटा ‘बिरामी टोली’ ले १३ ठाउँबाट १५ जनालाई समाती महाराजगञ्जस्थित प्रहरी बृत्तको हिरासतमा दाखिल ग¥यो ।
अरुले बेच्दा ग्राहक नआउलान् भनी यस्तो औषधिको व्यापारमा जवान युवती नै संलग्न हुने । रामेछाप खाँडादेवी घर भएकी २० वर्षीया सुप्रभा केसी धुम्बाराहीमा एसियन हर्बल होम फार्म सञ्चालन गर्छिन् । जडिबुटीको सेवनबाट यौन उत्तेजना बढाउने औषधि बेच्ने हो, धन्दा । मीनभवनमा २६ वर्षकी बसन्ता तुम्बाहाम्फे टेलिमार्केट खोलेर आफ्नोजस्तै उन्नत आकारको स्तन बनाइदिने नाममा महिलाहरुबाटै पैसा कमाउने धन्दामा छिन् । हुँदाहुँदा गणबहालका मारवाडी पनि यस्तो धन्दामा फेला परे ।
पसलमा सामान झार्न पाएको छैन, किन्ने मान्छेको घुइँचो लाग्ने देखेर हो, मारवाडीहरु यस्तो कारोबारमा लागेको । तर, ती सामान औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी बिक्री भइरहेका थिए । यहाँमात्र हैन, विदेशमा बस्ने आफन्तलाई पठाउन किन्नेको संख्या उत्तिकै बढी । किनभने, विदेशी बजारमा बिनाअनुमति कुनै पनि सामान बेचबिखन गर्न पाइँदैन । प्रहरीले विभिन्न ठाउँबाट त्यस्ता अवैध औषधि बरामद ग¥यो । सबभन्दा बढी डिमाण्ड यौन उत्तेजना बढाउने र लामो समयसम्म वीर्य स्खलन नहुने नाममा बेचिने औषधिको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा एकजना पीडित पुरुषले उजुर गरेका थिए, ‘यौनसम्पर्क गर्न थाल्दा एक मीनेट पनि नकटी स्खलित हुने समस्या लिएर हात्तीसारको टेलिसप पुगेँ । तीन दिन औषधि खाएपछि यौनसम्पर्क गर्न खोजें । बल्ल–बल्ल उत्तेजित हुने लिंगले त्यसपछि काम गर्न छाड्यो ।’ अर्थात्, शरीरलाई म्याच नगर्ने केमिकलको मिसावटले शहरका थुप्रै युवा–युवतीको यौनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
यस्तो गुनासो बढेपछि टेलिसप मार्केटिङ एशोसिएसनले बुस्ट क्रिम, स्लीमिङ हर्ब, स्लीम प्लस पाउडर, हर्बल टि, सोना बेल्ट, हेन्डसम अप, स्लीम प्लस, स्ट्रेच मार्क क्रिम, इ सिग्रेट जस्ता ३० प्रकारका औषधिमाथि छानवीन गर्न औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएको थियो । तर, तिनै औषधिको बजारमा अत्यधिक माग बढेपछि बेचबिखनको क्रम तीव्र बन्दै आएको छ । यस्तो व्यवसायमा संलग्न विकास गोयल, सुप्रभा केसी, बसन्ता तुम्बाहाम्फेसहित हर्बल सप कोटेश्वरका सूर्यबहादुर रायमाझी, ग्लोवल टिभी प्रोडक्टका कुमार भारती, टिलिवान सञ्जिवनीका बाबुराम ढकाल, ग्लोबल टेलिसपका यादवराज भोगे, विपिन बोलखे र रविन खड्का पक्राउ परेका हुन् ।